Isikolo samabanga aphantsi-Isikolo saMazwe ngaMazwe saseLyon
Umbono wethu, uMnqophiso kunye neeNqobo ezisemgangathweni
Isikolo samabanga aphantsi
Indlela yokwenza isicelo
Malunga ne-ISL PTA
Imizuzu yeNtlanganiso ye-PTA
Se si kolweni
Jonga ithala lethu leencwadi ↗
NgoMvulo ukuya ngoLwesihlanu
IYunithi yeMinyaka yokuQala kunye neSikolo sasePrayimari
Kwi-Early Year Unit (EYU: Transition-, Pre-, Junior and Senior Kindergarten) kunye nesikolo sasePrayimari (AmaBanga 1-5), umdla wendalo wabantwana nomdlandla zenza isiseko senkqubo yokufunda esekelwe kuphando kusetyenziswa i-International Baccalaureate's. Inkqubo yeMinyaka yasePrayimari (PYP) apho isikolo sivunywe ngokuvunyiweyo ngokupheleleyo. Oku kuphunyezwa ngendlela yokudlala esekelwe kwi-EYU.
I-PYP ilungiselela abafundi ukuba babe ngabafundi abakhutheleyo, abakhathalayo, ubomi babo bonke ababonakalisa intlonipho kubo nakwabanye, kwaye babe namandla okuthatha inxaxheba ngokukhutheleyo nangentembeko kwihlabathi elibangqongileyo. Besebenzisa imodeli yekharityhulam ye-PYP egxile kumntwana, ootitshala be-ISL benza indawo yokufunda evuselelayo neyahlukahlukeneyo evumela umfundi ngamnye ukuba aqhubele phambili ngokwamandla akhe. Abantwana bayakhuthazwa ukuba babelane ngamava abo ahlukeneyo ezentlalo neenkcubeko kunye nokuphuhlisa isakhono sokucinga ngokucazulula, ukwenza uqhagamshelwano kwaye babe ngabathabathi-nxaxheba abazimeleyo nabayilayo ekufundeni kwabo. Ukukhula kwabo buqu kukhuliswa ngeProfayili yoMfundi esembindini wePYP kunye nefilosofi yeIB ngokubanzi.
Iindlela ezahlukeneyo zokuhlola, ezibandakanya ukuzihlaziya komfundi kunye nokuzivavanya koontanga, zivumela uvandlakanyo oluqhubekayo lwenkqubo yokufunda kunye nengxelo rhoqo ebantwaneni nakubazali.
Ukongeza kulwimi (ukufunda, ukubhala kunye nokunxibelelana ngomlomo), imathematika, isayensi, itekhnoloji kunye nezifundo zentlalo, sibonelela ngenkqubo yobugcisa bokubonwayo, umculo, intshukumo kunye nedrama ukuvuselela ubuchule kuzo zonke iinkalo zekharityhulamu, iveki neveki yokwalusa, yezentlalo kunye nemidlalo yeqonga. Iiseshoni zemfundo yomzimba zikwaphucula ngakumbi ukukhula komntu. Abafundi baseprayimari nabo bayaxhamla kwinkqubo ye-PE elungeleleneyo kwithayimthebhile yabo yeveki, besebenzisa amaziko afana nejimu yethu encinci kunye nommandla osandula kufakelwa i-astro-turf yemidlalo emininzi. Abafundi baseprayimari abasezantsi nabo bayakonwabela ukusetyenziswa kwequla lokuqubha likamasipala wasekuhlaleni ixesha elithile enyakeni.
Abasaqalayo ulwimi lwesiNgesi ukusuka kwiBanga loku-1 ukuya phezulu banikwa inkxaso kwi-ESOL (isiNgesi kubantu abathetha ezinye iiLwimi) ngeendleko ezongezelelweyo ukuba kuyimfuneko kwaye bonke abantwana bafunde isiFrentshi njengolwimi lwasemzini okanye ulwimi lwasekhaya.
Abafundi be-EYU kunye nabafundi basePrayimari bayaxhamla kutyelelo lwarhoqo lwasesikolweni kunye nohambo oludityaniswe neeYunithi zabo zoPhando, kwaye zonke iiklasi ezisuka kwiBanga loku-1 ukuya kwelesi-5 bonwabele uhambo lokuhlala lonyaka ubuncinane lweentsuku ezintathu. Isikolo sibeka phambili uhambo oluya eFransi okanye kumazwe akufuphi nemida ukuze kugcinwe indawo yaso yekhabhoni isezantsi kwaye senze uninzi lobutyebi obunokwenzeka ngaphandle kokuhamba kakhulu.
Isikolo saseprayimari siye sanotyelelo lovavanyo lwe-IB PYP ngo-Oktobha 2021, neengxelo ezichulumancisayo ezivela kwiqela elityeleleyo elabonisa ukuba isikolo sizifezekisile zonke iimfuno ezimiselweyo zokubandakanya i-IB kwakhona. Owona mvuzo mkhulu we-ISL, nangona kunjalo, yayikukuva kubo ukuba ilizwi ababeliva rhoqo kudliwano-ndlebe nabafundi, abafundisi-ntsapho nabazali ngokufanayo ‘linoyolo’!
IModeli yeKharityhulam ye-IB yeMinyaka yasePrayimari (PYP).
Ngeenkcukacha zekharityhulam yethu ephambili, nceda uqhagamshelane namaxwebhu ethu e-PYP:
Isikhokelo sekharityhulam esisiseko se-ISL
Okulindelweyo kwisifundo sokuqala
Inkqubo yokuqala yophando
QAPHELA: Konke ukufundisa nokufunda kwiPYP kuxhaswa zii-ISL's Umbono, iiNqobo ezisemgangathweni kunye noMnqophiso kwaye i Iprofayile yoMfundi we-IBO.
KwiSizwe samaZwe of
Faka isicelo kwi-Intanethi
Hlela iikuki ezikhethwayo
KwiSikolo saMazwe ngaMazwe saseLyon sizibophelele ekuncedeni abafundi bethu bafezekise amandla abo obuqu kunye nezemfundo ngophuhliso lokuzimela, uthando lokufunda ubomi bonke kunye nokuqonda ukuqonda kunye nentlonipho ngokwenkcubeko.
Sivunywe okanye ngamalungu:
Sinikezela ngeekuki. Ukuba ucinga ukuba kulungile, nqakraza nje "Yamkela konke". Unokukhetha kwakhona uhlobo lwecookies oyifunayo ngokucofa "Useto". Funda umgaqo-nkqubo wethu weekuki
izicwangciso Yamkela yonke
Khetha uhlobo lwecookies oza kuyamkela. Ukhetho lwakho luya kugcinwa unyaka omnye. Funda umgaqo-nkqubo wethu weekuki
Ezi cookies azikhethi. Ziyafuneka ukuze iwebhusayithi isebenze.
Ukuze siphucule ukusebenza kwewebhusayithi kunye nokwakheka, ngokusekelwe kwindlela esetyenziswa ngayo iwebhusayithi.
Ezi cookies ziqinisekisa ukuba iwebhusayithi yethu isebenza kakuhle kangangoko kunokwenzeka ngexesha lotyelelo lwakho. Ukuba uyala ezi kuki, ezinye izinto ezisebenzayo ziya kunyamalala kwiwebhusayithi (umz. iimephu ezingekhoyo, amaxwebhu, kunye nezixhobo zoguqulo ezaphukileyo).
Ngokwabelana ngezinto onomdla kuzo kunye nokuziphatha njengoko undwendwela indawo yethu, wongeza ithuba lokubona umxholo wobuqu kunye nezibonelelo.
Gcina Yamkela yonke